Maanta iyo wararka Caalamka
Waxaa diyaarisay; Ikraam Cali-kaar
Agoosto 30, 2006
Midowga Yurub oo Liiskeeda Argaggaxisada ka saartay Axmed Yuusuf oo ka tirsanaa Al-barakaat
War kasoo baxay wasaarada arrimaha dibada Sweden ayaa lugu sheegay in kadib markii Mareykanka liiska dadka uu ku xirriiriyey argagaxisada uu ka saaray midkii ugu dambeeyey ee sadexdii dhalinyarro ee soomaalida sweden ahaa kana tirsanaa shirkadii xawaalada Al-barakaat ee albaabada la iskugu laabay, ayaa dhinacoodana waxey shaaca ka qaadeen in laga bilaabo maanta oo 30 agoosta ee sanada 2006 uusan kamid aheyn shaqsiyaadka lugu xirriiriyey argagaxisada.
Wasaarada ayaa intaas hadalkeeda ku dartay in taariikhadaasi la shaaciyey warkan uu Axmed Yuusuf uu xor u yahay adeegsiga maalkiisa la xanibay sanadkii 2001-da markaasoo aheyd waqtigii Mareykanka ku eedeyey inuu yahay shaqsi xirriir la leh Alqaacida.
Bishan 25-keeda ayaa dowlada Mareykanka shaaca ka qaaday iney ku waayeen wax dambi ah oo la xirriira eedeymaha loo heysto. Dowlada Sweden ayaa juhdi u gashay sadexdaasi dhalinyarro ee dhalashada dalkeeda heysta sidey Mareykanka ugu qancin laheyd in raggaasi aanu wax xirriir ah la laheyn waxa loogu yeero argagaxisada.
Shirkii kooxaha xirriirka Soomaaliya oo baaq laga soo saaray
Marka la eego marxalada dalka Soomaaliya marayo iyo sidey taageero caalami uga baahan ayaa hadana waxaa jira in wadamada lugu sheegay iney daneyaan arrimaha Soomaaliya ay u muuqdaan kuwo ka cago jiidayo taageerada dhabta ah, halka qaar kalena ay wataan dano iyaga u gaar ah.
Hadaba shirkii shalay oo aheyd 29 bisha ogoosto lugu qabtay magaalo madaxda wadanka sweden ee loogu magac darray "Kulankii kooxaha caalamiga ah ee xirriirka Soomaaliya" ayaa laga soo saaray baaq loo diray dhamaan dhinacyada arrimaha Soomaaliya isku haya ee Maxkamadaha iyo Dowlada KMG ah.
Kulan oo ay kasoo qeyb galeen Midowga Yurub, Qaramada Midoobey, Mareykanka, Norway, Talyaaniga, Jaamacada Carabta Midowga Afrika iyo urrur goboleedka la baxay IGAD, ayaa baaqooda ku sheegay in halkoodi laga sii wado wadahalada la doonayo in lugu dhex dhexaadiyo dowlada itaalka darran ee Beydhabo kooxaha wadaada ah.
Haweeneyda la yiraahdo Annik S�der oo ah wasiiru dowlaha arrimaha dibada Sweden iyo iskaashiga caalamiga ahoo saxaafada la hadleysay kadib shirkii kooxahaasi ayaa sheegtay in "Ummadda soomaalida darteed garagaarkasta loo fidiyo Soomaaliya dhinacyada isku hayana ay iskaga soo dhawadaan intii hore.
Shirkan oo intuu socday lugu sheegay in laga digay fashil ku yimaada wadahalada nabada ee kooxaha soomaaliya oo haddii ay taasi timaadana ay dhici karto musiibo ba'aadnimo iyo dagaalo ka dhaca gobolka Geeska Afrika
Annika S�der waxey sheegtay iney rajadey ka qabto in wadahalada u dhaxeeya kooxaha Soomaalida ay wax wanaagsan kasoo bixi doonaan iyadoo hoosta ka xariiqday inaan la dooneyn waqtigan xaadirka ah dagaal geeska Afrika sababa oo ay isku qabtaan dalalka Soomaaliya danaha gaarka ah ka leh waxaana ay intaasi raacisay in dhibaatooyinkii halkaasi horey uga dhacay ugu filan tahay.
Bishii juun ee sanadkan ayey Mareykanka iyo Norway ay qaban qaabo u galeen qabsoomida shirka arrimaha Soomaaliya loogaga hadlayo ee kooxaha xirriirka caalamiga ah iyadoo la ogsoon yahay in shirkan la magac baxay kooxaha xirriirka caalamiga ah ee Soomaaliya la aasaasay markii kacdoon Maxkamaduhu hogaaminayeen ay kaga awood roonaadeen dagaal oogeyaalkii magalaada Muqdisho. Ugu dambeyntii waxey kooxdani sheegeen in haddii maxkamadaha iyo Dowlada KMG ah ay heshiiyaan ay qabanayaan shirweyne la sheegay inuu ka dhacayo dalka Talyaaniga islamarkaasina lacag loogu aruurin doono.
Israa'iil oo gaashanka ku dhifatay xayiraad laga qaado Lubnaan
Ra'iisal wasaaraha xukuumada Israa'iil ayaa gaashaanka u daruuray xayiraad laga qaado hawada iyo badda ee ay saareen Lubnaan muddii bisha aheyd ee dagaalka ba'an ku hayeen.
Kulan uu maanta la yeeshay Ehut Olmert xoghayaha guud ee Qaramada M oo haatan socdaal ku jooga barriga dhaxe ayuu sheegay in waqtigan xaadirka ah aysan arrintani suuragal aheyn.Socdaalkiisi ugu horeeyey oo ku tagay Lubnaan ayuu u sheegay ra'isal wasaare Sinyoora hindisaha Qaramada Midoobey waxaa kamid ah hindasayaashaasi labo qorsho oo farta ku fiiqay waa tan koowaade in labada askari ee yahuuda ah la sii daayo iyo in Israa'iil lafteeda ay ka qaado cuno qabateynta xagga hawada iyo badda ee ay saartay Lubnaan. Inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn natiijadii kasoo baxday kulanki Annan iyo Koffi hadana waxaa muuqata in Israa'iil ay ka dhago adeyseyso qorsheyaasha Koofi Annaan oo maanta gelinkii dambe u duulay daanta galbeed ee dhulka falastiinyiinta halkaasoo uu kulan kula yeeshay Maxamuud Cabbaas Abuu Maazin.
Qeybo kamid ah jaziiradaha Indoonisiya oo badda hoosteeda markale garriirtay
Jaziirad ku taala dalka Indoosiya ayaa badda hoosteeda gariirtay,sidaasina waxaa ku waramay warbaahinta caalamka. bad gariirkan ayaa gaarayey 6.4 oo ah halbeega lugu cabiro dhul gariirada. Nin u hadlay machadka saadahasha cimilada ayaa ka digay iney dhici karto bad gariirka Tsunami, inkastoo tani baqdin gelisay dadka deegaanadaasi dagan hadana machadka ayaa lasheegay inuu dib ula laabtay deginiinta amuurtaasi ka wajahneyd.
Balse hey'ada Mareykanka ah ee sahminta hawada ayaa iyadana sheegtay in bad garrirada jaziirada ka dhacday ay waqtiyo kala duwan dhaceen waqtiga bartamaha yurub kuwaasoo ahaa kuwo halbeeyadooda kala duwanayeen.
Xabsigii Abu qureyb ee Ciraaq oo albaabada la iskugu dhiftay
Xabsigii caanka ku noqday jir dilka maxaabiista halkaasi ku jirtay Abuu Gureyb ee ku yaal duleedka magaalada Bakhdad ee xarunta u ah dalkaasi Ciraaq ayaa albaabada la iskugu laabtay sida ay sheegayaan wararka halkaasi laga helayo. Wargeyska The Times ayaa isagoo kasoo xiganaya mas'uuliyiinta dowlada dalkaasi sidaasi qoray. Balse Xukuumada Washington amuurtan sheegtay ineysan dooneyn iney ka munaaqishoota wararka la xirriira xidhitaanka xabsigaasi, walow ay sheegeen bilowgii sanadkan in la xirri doono. Kuxigeen wasiirka cadaalada ayaa sheegay maxaabiistii halkaasi ku jirtay la geynayo xeryo ku ag yaala garoonkii diyaaradaha ee bakhdaad International.
Sanadkii 2005-ta ayaa guud ahaan waxaa calaamka mar qura hareeyey sawiro naxdin iyo argagax leh oo xabsigaaasi laga soo qaaday kuwaasoo muujinaya dhibaatooyinka ciidamadii xornimo doonka ahaa ee Mareykanka dalkaasi ku duulay ku kaceen.
Kooxo Kurdiyiin ah oo sheegtay qaraxyadii ka dhacay dalkaasi
Kooxo Kurdiyiin ah oo la magac baxay TAK ayaa shaaca ka qaaday weeraradii Bambaano ee dalakasi ka dhacay iney ka dambeeyeen.Qoraal ay ku soo daabaceen bogga rasmiga ah ee ay ku lee y�hiin ayey ku sheegeen iney jawaab u tahay waxa ay ku sheegeen falalka dowada Ankara u geysato dadka laga tirada badan yahay ee Kurdiyiinta ah. Sidoo kale waxey sheegeen in qaraxydii ka dhacay Marmaris iyo Istanbul iney ku lug lahaayeen.
Dowlada Turkiga waxey dhinaceeda sheegay in falaagadan la baxday TAK ay tahay mid ay ka dambeyso Xisbiga Shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK, walow ay PKK ay sheegeen iney TAK ay tahay urrur aysan shaqo ku laheyn ee goonidoosa u socda.
Wararkii Shalay 28.8.2006
Koofi Annaan oo Lubnaan tagay
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Koofi Cannaan oo booqasho ku tagay dalkaasi Lubnaan tan iyo markii dagaalka lgu hayey ay Israa'iil ka qaaday . Kulan uu la yeeshay wasiirada dowlada dalkaasi ayuu codsaday in la sii daayo labada askari ee ay Xisbullaah afduub ahaanta u heysato.
Canaan oo lugu wado inuu booqdo goobii ay Israa'iiliyiinta duqeynta xoogan u geystay ayaa ka codsaday Israa'iil iney ka qaado xayiraada hawada iyo badda ee ay ku heyso Lubnaan.
Suudaan oo diidan in ciidamada Qaramada Midoobey la geeyo Darfur
Kulan ay Qaradama Midoobey iskugu yimaadaan loogana munaaqishoonayey sidii ciidamo nabad ilaalin ah oo lugu badali lahaa kuwa halkaasi kale Afrikaanta ah ee jooga gobolka darfur ee dalka Suudaa ayaa muran weyni ka taagan yahay. Arrintani ayaa axaa ugu wacan dowlada Suudaan oo diidan in ciidamo halkaasi loo diro.
Isku duwaha garagaarka Qaramada Midoobey ee Darfur Jan Egeland ayaa ka digay in wadcdiga amni ee halkaasi ka jira iney keento musiibo bani'aadnimo, wuxuuna uu ku nuux nuuxsaday in sadex malyan oo reer darfur ah ay gar gaar deg deg ah u baahan yihiin.
Dowlada Suudaan iyo Qaramada Midoobey ayaa isku af garan la' in halkaasi ciidamo kale oo aan aheyn afrikaan ah la geeyo dowlada Suudaanse amuurtan waxey u aragtaa iney tahay mid arrimaheeda gudaha la farogelinayo waxaana ay ka digtay in natiijada kasoo baxda haddii ciidamo aysan raali ka aheyn la geeyo ay Qaramada Midoobey dusha u ridan doonto.
Agoosto 27, 2006
Afartaneeyo dad ah oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka Mareykanka
Dad gaaraya kon ruux ayaa geeriyooday shalay oo aheyd kadib markii ay burburtay diyaarad ay saarnaayeen taasoo ku dul burburtay meel u dhow garoon diyaaradeed oo ku yaal agagaarka
Lexington eee gobolka Kentucky waxaana la sheegay in shilkaasi diyaaradeed uu ka badbaaday.
sida uu ku waramayo telefeyshinka SKY News ayaa isna dhiniciisa sheegay in shilkaasi diyaaradeed aysan ka bad baadin rakaabkii saarna. Diyaaradan oo magaceeda la yiraahdo Comair ayaa shilku ku yimid markii ay wax yar kadib ay ka kacday garoonka Blue Grass.
Afhayeeen u hadlay waaxda duulimaadka dalkaasi ayaa shaaca ka qaaday in shilkaasi diyaaradeed uu geystay qasaaro baaxad leh, halka qof ee ka badbaaday shilkaasi ayaa xaaladiisa la sheegay iney aad u liidato. Diyaarada comair waxey kamid tahay diyaaradaha ay Delta Airlens hoosta waxaana ay ku socotay magaalada Atlanta ee gobolka Goergia.
Hogaamiyaha Xisbullaah oo ka shalaayey afduubkii loo geystay askari Israa'iiliyinta
Hogaamiyaha Xisbullaah Sayid xassan Nasrullaah ayaa markii ugu horeysay tan iyo intii la hakadiyey dagaalkii Israa'iil dalkiisa ku qaaday shaaciyey inuu ka shalaayey afduubkii ay u geysteen labadii askari ee yahuuda ahaa kuwaasoo ka dhashay in Israa'iil ay dagaal baaxad leh ku qaado dhulka koonfrta dalkaasi oo ay ku dhinteen dad gaaraya 700 oo Lubnaaniyiin ah. Nasurllaah waxa uu sheegay ineysan afduub u geysan laheyn labadaasi askari hadey ogaan lahaayeen in dagaal arrintu isku badaleyso dhinaca kalena waxa uu cadeeyey in la is dhaafsado maxaabiista ay waqtigan xaadirka ah kala hadleen Israa'll. Sidoo kale waxa uu sheegay in Talyaaniga iyo Qaramada Midoobey ay ku booriyeen in amuurtan ay kala hadlaan maamulka Tale Aviv.
Suxufi basaasnimo loogu xiray dalka Suudaan
Weriye u dhaashay dalka Mareykanka ayaa dacwad loogu soo oogay dalkaasi Suudaan kadib markii falal basaasnimo leh lugu eedeeyey. Weriyahan oo magaciisa la yiraahdo paul Solopek ayaa ka tiran wargeyska Chicago tripune iyo National Geographic. Weriyahan ayaa waxaa la qabatay bishan ogosto lixdeeda isaga iyo nin tarjumaan ah, waxaana la sheegay inuu halkaasi u joogay howlo saxafinimo oo ay u soo dirtay shaanalka National Geographic. Ninkani waxaa lugu eedeynayaa inuu ku dhaqaaqay howlo basaasnimo iyo warar been abuur ah oo la sheegay inuu gobolkaasi ka faafinayey.
Balse telefeyshinka uu ka tirsan yahay ayaa sheegay in weriyahoodu waxa lugu eedeynayo tahay been lasoo dhoob dhoobay islamarkaasina codsaday in si deg deg ah loo sii daayo. Lama oga goorta la sii deyn doono iyo inkale iyadoo maalintii shalay aheyd maxkamad la soo taagay si dembiyada lugu eedeynayo lugu qaado balse wargeyska iyo telefeyshinka uu ninkan ku howl galo ayaa shaaciyey iney ku howlan yihiin sidey u sii deyn lahaayeen.
Agoosto 25, 2006
Midowga Yurub oo ku yaboohay ciidan gaaraya 7000 askari oo dirayo dalka Lubnaan
Go'aanka ciidamada loogu dirayo dalkaasi lubaan waxa uu ahaa mid soo baxay kulankii ay maalinimadii jimcaha yeesheen wasiirada arrimaha dibada Midowga Yurub ee ku shiray magaalada Brusells ee dalkaasi Belgium kuwaasoo ka hadlayey siddii xadka labada loo geyn lahaa ciidamo nabada ilaaliya.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Koofi Cannaan oo kulankaasi goob joog ka ahaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay dowrka dalka Yurub ay ka qaateen
amuurtan. Gaar ahaan wuxuu amaan u soo jediyey dalalka Talyaaniga iyo Faransiiska oo ciidamada ugu badan ee gobolka loo dirayo ku yaboohay.
Qaramada Midoobey ciidamada gobolka loo dirayo ee ay dooneyso ayaa noqonaya 15.000 askari, mar uu Annan ka hadlayey kulaankaasi ayuu sheegay dalalka Maleysiya, Indooniya in iyagna war wanaagasan kasoo yeeray halka turkigana sheegay iney kasoo fekerayaan, walow Israa'iil ay sheegtay ineysan dooneyn dalal muslin ah oo ciidankooda xadka la geeyo.
Dhinaca kale Israa'iil ayaa xirtay dhamaan dhinacyada bada iyo hawada Lubnaan kadib markey sheegtay iney is hortaageyso waxey ku sheegtay in si qarsoodi ah Xisbullaah loogu keeno, afhayeen u hadlay dowlada dalkaasi ayaa shaaca ka qaaday in xayiraadaasi laga qaadi doono marka ay halkaasi yimaadaan ciidamo nabad ilaalineed.
Denmark oo muslimiin badan oo dalkeeda ah ku eedeysaneysa aragagxisanimo
Afar dhalinayarro ee reer Denmark ah ayey dowlada dalkaasi dacwad la xirrirta argagaxisanimo ku soo oogtay. Dhalinyaradan oo kan ugu weyni da'diisu tahay 21 jir ayaa waxyaabaha qarxa ama ay adeegsadaan kuwa naftooda biidaamiya laga helay, mid kamid ah dhalintaasi ayey dowladu sheegtay inuu xaday lacag gaaraysa 100.000 oo lacagta wadankaasi halka dhamaantood misna lugu wada eedeynayo iney xirriir isrgaasiineed oo qoraal ahi dhexmaray ninka la yiraahdo Saciid Mansoor oo isagu ah nin dhawaantan loo xiray aragagxisinimo.
Dalka Denmark oo keliya maahan dalka dad badan oo muslimiin ah oo ku nool reer galbeedka ku eedaya iney yihiin argagaxiso ama sameynayey falal aragaxiso, toddobaadkan hortaantiisi ayey aheyd markii dalalka Jarmalka iyo Holand laga sheegaye dad ayraboortada lugu qabtay iyagoo lugu tuhmayey falal aragagaxisanimo.
Agoosto 23, 2006
Suuriya oo ku hanjabtay iney xireyso xadka ay la wadaagto Lubnaan
Labada dal inkastoo xirriirkoodu dilmaasiyadeed xumaaday tan iyo markii la dilay Rafiiqal Xariir ra'iisal wasaarihii hore ee Lubnaan hadana dagaalka Lubnaan lugu qaaday waxaa la oran karray waa fursad markale ay labada dal kaga hadlaan mugdiga soo dhex galay iyo sidey meel uga soo wada jeesan lahaayeen Israa'iil oo labada dal colaadi kala dhaxeyso. Saas oo ay tahayna Suuriya waxaa saaran cadaadis caalami ah waxaana indhaha si gaar ah uga haya dowlada Mareykanka oo ku eedeyneysa iney cabad ku tahay hormarka gobolka.
Dowlada Suuriya ayaa hadaba waxey ku hanjabtay iney xadkeeda ay la wadaagto Lubnaan xireyso haddii ciidamada nabad ilaalinta ah ee Qaramada Midoobey ka socda la geeyo. Madaxweyne Bashaaral Asad waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay xaalada haatan ka jirta goblka sii xumeyneyso isagoo hadalka ula jeedo in xadka dalkiisa yahay mid aan amni ahaan karrin wadciga Lubaan ka jira awgeed.
Wasiirka arrimaha dibada Suuriya Walid Mucalim oo kulan la yeeshay dhigiisa dalka Filand ayaa sidaasi sheegay walow wasiirka Filandeeska ahi hadal uu saxaafada siiyey ku sheegay in Suuriya aysan dooneyn dhab ahaan iney xirto xadkeeda balse ay shaacisay. Dhinaca kalena ra'iisal wasaaraha Lubnaan Sinyora ayaa sheegay in hadalka ka soo yeeray dowlada Dimish ay keeneyso iney wax u dhinto xirriirka hada ulaha booca leh ku tukubaya ee u dhaxeeya, wuxuuna hoosta ka xiriiqay in Suuriya ay arrintaasi dhabarka u ridaneyso haddii ay xirto xadkiisa.Sidoo kale waxa uu codsaday in labada dowladooda ay wadahadlaan iyadoo markaasi eegaya danaha labada dal.
Suuriya waxey dooneysa waaba haddii caalamka ka yeello ciidamada nabad ilaalinta ee la geeynayo xuudaha Israa'ii iyo Lubaan in lugu darro ciidankeeda halka reer galbeedku gaar ahaan dalalka aanu xirriirka wanaagsan ka dhaxeyn u arkaan iney carqaladeyneyso qaraarkii Qaramada Midoobey ee 1701 kaasoo lugu soo jinayey dagaalka Israa'ii ku qaaday dalkaasi Lubnaan.
Haweeney sideed sanno afduub loogu heysatay oo soo baxsatay
Xarrun boolis oo ku taala dalka Ostari ayaa haweeney timid u sheegay askartii iney kasoo baxsatay afduub loogu heystay sideed sanno.Markii laga dhageystay gabadhaasi warbixinta la xirriirta afduubkeeda ayaa booliska sameeyeen howlgal ay ku daba joogaan nin da'diisa lugu sheegay afartan jir kaasoo loo maleynayo inuu afduubtay.
Gabadhan afduubka loogu geystay ayaa la yiraahdaa magaceeda Natascha Kampusch ayaa sheegay in markii afduubka loo geysanay ay aheyd xilli ay ku soctay iskool waqtiga afduubka loo geystayna ay aheyd sanadii 1998-di. Gabadhani waxey sheegtay in muddadi sideeda sanno aheyd uu ninkii afduubtay u oglaaday iney telefeyshinka daawato wargeyadana akhriso, sidoo kale ayey sheegtay iney mararka qaar u soo bixi jirtay ayna lugu baxsan jirtay marka ninkaasi afduubay uu la socodo.
Ugu dambyntiina ay kasoo baxsatay garaashkii afduuba loogu heystay. Boolisku waxey sheegeen inaan wax muujinaya calaamad kufsi ah aan loo geysan xaaladeeda caafimaadna ay aheyd mid wanaagsan.
Haatan booliska ayaa bilaabay in magaalada Wiene ee xarrunta u ah dalkaasi iyo deegaanada ku teegsan ka baaadi goobaan ninkaaasi oo ay tilmaamihiisa bixisay walow aan gacanta lugu soo dhigin.Dhacdani waa iugu horeysay ee dalkaasi ka dhacday qarnigii tagay dhamaadkiisa iyadoo sidoo kale la sheegay in waqtiga afduubka loo geystay aheyd waqti iyadana carruur yar yar oo dalkaasi u dhashay la waayey meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Dhiiga DNA-ga la yiraahdo ayaa laga qaadaya si loo xaqiiqsado iney iyada tahay iyo kale.
Agoosto 21, 2006
Booliska Britain oo kow iyo toban ruux ku eedeeyey iney ka dambeeyeen qaraxyadii dhicisoobay ee diyaaradeed
Booliska dalka Ingiriiska ayaa maanta shaaca ka qaaday iney heleen alaabooyin ka sameysan kiimiko iyo qalab kale oo lugu sheegay iney yihiin qalabkii mujaahidiinta kuwaasoo ah muuqaalo fiidiyow ah. Boolisku shalay oo isniin aheyd waxey markii ugu horeysay soo bandhigeen qalabyada la sheegay iney adeegsanayeen kuwii doonayey iney weerararo qaraxyo ah la beegsadaan diyaarado ku socday dalka Mareykanka. Boqolaal kumbiyuutaro iyo cajaladaha CD-yada loo yaqaan ayaa iyagana gacanta lugu dhigay kuwaasoo baaritaan lugu sameynayo balse waxyaabaha ay boolisku helaan waxaa ugu muhiimsan waxladda ka sameysan kiimikada.
Sidoo kale muuqaalo fiidyow ah oo ay iska duubeen kuwa doonayey in weeradasi geystaan ayaa gacanta lugu dhigay, waxaana la sheegay in cajadaladahaasi muuqaalada ah la soo gudbin lahaa iyadoo farriin ah kolka uu dhaco qaraxyada la maleegayey. Sideed nin oo kamid ah kow iyo tobankaasi la qabtay ayaa muuqaalada cajaladaha ah ka muuqdeen wejiyadooda sidoo kalena wiil 17 jir ah ayaa isagana kamid ahaaa. Boolisku haatan waxey raggaasi ku soo oogeen dacwad la xirriirta dil ay maleegayeen iyo aragagaxisnimo. Halka qaar kalena dacwadooda tan iyo toddobaadka dambe arrimahooda la eegi doono.
Shil tareen oo lix qof ku dhinteen oo ka dhacay dalka Isbeyn
Ugu yaraan lix qof ayaa lugu soo waramayaa iney ku dhinteen halka sodon iyo lix kalena la runsan yahay iney ku dhaawacmeen kadib markii tareenka dhulka mara oo ay dadku raacaan uu ka baxay wadadii uu marayey,
Tareenkan oo ay saarnaayeen rakaab gaarayey 426 ayaa ka yimid magaalada la yiraahdo Vigo oo xaga waqooyi bari kaga taala dalkaasi, tareenkan ayaa wararku sheegeen inuu ku socday magaalo ku taala xuduuda dalka Faransiiska markii uu qadkiisa ka baxay iaydoo aan la garaneyn waxa sababay.Kooxaha gargaarka u qaabilsan ayaa halkaasi tagay kana sameeyey cisbitaalo si deg deg ah loo adeegsado. Dowladuna ma sheegin in shilkaasi noqon karro mid falal aragagaxiso la xiriira.
Pakistaan oo dooneysa in waxey ka badasho shareecada Islaamka ee dalkeeda looga dhaqmo
Inkastoo uu ahaa hindiso aan lugu guuleysan hadana dowlada dalkaasi waxey dooneysa in shareecada Islaamka ee ku dhaqankeeda dalkaasi u yaalo wax ka badasho sida marka ay timaado arrin kufsi dhacdo aan la qicaabin qofkii falkaasi geysto taas o badalkeeda laga dhigo marka la helo afar marqaatiyaal ah si ciqaabtaasi loo fuliyo.
Arrintani ayaa keentay iney dhaliso sida wararka dalkaasi laga helayo mid dhalisay buuq. Kooxaha mucaaridka islaamiyiinta ah ayaa ku hanjabay banaanbax cabasho oo arrintaasi ka dhanka ah ay u gudbin doonaan baarlaamka islamarkaasina ay ku horbanaan bixi doonaan.Asxaabta siyaasadeed ee dowlada ku jira ayaa durba sheegay iney dib ula laabteen hindisahaasi aan u muuqan mid Islaamka quseeya ama wax u dhimaya shareecada.
Augoosto 19, 2006
Soomaalida Sweden oo ku banaanbaxday safaarada Itoobiya
Iyadoo hadal heynta la xirriirta ciidamada itoobiya ee ku sugan dalka Soomaaliya meel kamid ah badatay ayaa hadana waxaa taas barbar socda dibadbaxyo ka dhan ah Itoobiya oo iyadu farogelinta qaawan ee ay ku heyso arrimaha Soomaaliya noqdeen kuw aan qorsoon oo iyadu lafteeduba qirtay kuwaasoo caalamka dalacadiisa ka dhaceen haba u badnaadeen dalalka Yurub ku yaala iyo Kanada.
Caasimada Sweden ee Stockholm ayaa waxaa shalay ka dhacay banaan bax siweyn loo soo agaasimay kuwaasoo ay kasoo qeyb galeen dad kor u dhaafay 300 oo qof. Banaanbaxan ayaa waxaa soo abaaburay urrrada kala ah Urrurka Isbaheysiga Ummadda Soomaaliyeed, Somali Diaspora, iyo urrurka Somaliska Islamka F�rsamling.
Mar aan xalay qadka taleefanka kula xirriiray qaar ka tirsan qaban qaabiyeyaasha banaanbaxan oo kala ah Maxamed Sadiiq Maxamed iyo gudoomiyaha Isbaheygsiga Ummadda Soomaaliyeed C/qaadir Makaraan ayaa labaduba ii sheegay in banaabxani ujeedadiisa aheyd siddii faragelinta Itoobiya ay ku heyso arrimaha Soomaaliya faraha uga qaadi laheyd.
Dhinaca kale mar aan weydiiyey Maxamed Sadiiq sababta ay maalin sabti ah safaaradina furneyn ay baan baxooda ugu aadiyeen ayaa ii sheegay in wadankan Sweden inta badan banaanbaxyada ka dhaca ay dhacaan maalmaha aan dadku shaqeyn sidaasi daraadeedna fursad u siineysa in Soomaali badan ay ka qeyb qaataan. Waxaan sidoo kale weydiiyey iney jirto cid ay la kulmeen oo ka tirsan safaarada ayuu ii sheegay iney arkeen dad ka tirsan safaarada balse ujeedooda banaanbaxa ay maalintii khamiistii ee la soo dhaafay u gudbiyeen safaarada. Waxaana mas'uuliyiinta safaaradu u sheegeen iney kulan ka wada yeelaan doonaan arrimaha la xirriira faragelinta dowladooda ku heyso arrimaha Soomaaliya.
Sidoo kale ayuu mudane Maxamed Sadiiq sheegay in banaanbaxani ahaa mid jawi wanaagsan ku dhacay noociisa oo kalena aan soo marrin, iyadoo saxaafada Sweden iyo wakaalada wararka dalkan u faafisa ee TT ay joogeen, sidoo kalena siyaasiin ka tirsan asxaabta siyaasadeedna ay xaadir ku ahaayeen goobta ay dibadbaxu ka dhacayey.
Lubnaan oo ku hanjabtay iney hakineyso ciidamadeeda ku jeeda koonfurta
Wasiirka gaashaandhiga dalkaasi Lubnaan Alias Murr ayaa ku hanjabay in dowladiisa ay hakineyso ciidamada Lubnaan ee ku jeeda koonfurta dalkaasi kadib markii waxa uu ku sheegay in Israa'iil jebisay xabad joojintii shanta cisho socotay.Kadib markii ciidamada Isra'iil ay weerar ku qaadeen gudaha fog ee Lubnaan halkaasina ay ku dhinteen labo Lubnaaniyiin ah iyo hal askari oo Yahuudi ah.
Israa'iil waxey ku andacootay iney abursheysay dhaq dhaqaaq hub ay Suuriya iyo Iiraan ugu soo gudbinayeen Xisbullaah. Israa'iil weerarkeeduna waxa uu diirada saaro tuulada la yiraahdo Bodai oo xaga galbeed kaga taala magaalada
Bakaabek oo xudduud ahaan 100 km u jirta Israa'iil.
Laakin wasiirku waxa uu sheegay iney suuragal noqon karto in dowladiisa ay joojiso ciidamada ay u diri lahaayeen koonfurta hadduu Gollaha uusan tafaasil ka bixin falka Israa'iil ay ku dhaqaaqday. Falkan weerarka ah waa kii ugu horeeyey ee noociisa dhaca tan iyo maalintii isniintii ee isbuucii ina soo dhaafay hirgalay.
Ciidamo Ameerikaan ah oo ku dhintay Afgaanistaan
Ugu yaraan afar ka tirsan ciidamada Mareykanka ee jooga dalkaasi Afgaanistaan iyo labo askari oo iygana ah ciidamada Afgaanistaan ayaa la dilay lix kale oo ameerikaan ahni waa dhaawacmeen, kadib markii ay tacshiirado isweydaarsadeen kooxo Taalibaan ah oo ay isku heleen xagga koonfureed ee gobolka Kunar, sida ay werisay wakaalada wararka faafisa ee AFP.
Laakin afhayeen xulufada Mareykanku hogaanshe ee ku sugan Afgaanistaan ayaa sheegay in tirada dhimatay ee ciidamadoodu gaarayaan 3 askari halka afar lugu sheegay.Deegaanka la yiraahdo Uruzgan ee dhanka koofureed ayaa sidoo kale lugu dilay askari mareykanka ah oo halkaasi howlo u joogay. Dhinaca kalena ciidamada isku dhafan ee dalkaasi jooga ayaa afhayeen u hadlay waxa uu sheegay in ciidamadaasi mareykanka ah iyagoo adeegsanaya magaca xulufada ISaf la dilay markii tacshiiradaha isku dableyda ka tirsan taalibaan.
Nin dacwad loogu soo oogay argagaxisanimo Denmark
Nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Marooko heystana dhalasho denish ah ayaa dacwad la xirriirta argagaxisanimo lugu soo oogay kadib markii la sheegay in ninkaasi uu ka qeyb qaatay waxyaabo dadka ku dhiiragelinaya iney falal aragax ah ku dhaqaaqaan.
Ninkan oo la yiraahdo Mansuur ayuu xeer ilaaliyaha dowlada sheegay inuu sameeyey waxyaabaha ay ka mid yihiin cajalado muuqaalo ah sida kuwa DVD-da loo yaqaano kuwa maqalka iyo sawiro muujinaya dad ka hadlaya Jihaad-ka iwm.
Booliska oo ay ninkani la socdeen arrimhiisatan iyo sanadkii 2004-ta islamarkaasina xabsiga la dhigay bishii september ee sanadkii hore ayaa iska fogeeyey dhamaan eedeymaha loo heysto. Ninkani ayaa qarka u saaran in lix sano oo xarig markuu dhameysto dalka laga musaafurin doono.
Wareysi la sheegay in jariirada Washington Post ee dalka Mareykanka ayuu sheegay in dalka Denmark yimid sanadku markuu ahaa 1983-dii waqti yar kadibna waxaa uu guursaday haweeney u dhalatay dalkaasi. Jariidadu waxey sheegtay inuu saaxiibadiis laga yaabe kamid ahaayeen dadkii ka qeyb qaatay weeraradii 11 septermber sanadii 2001-da loo geystay dalka Mareykanka. Maruu aragtidiisa ka dhiibanayey weeraradii ka dhacay dalkaasi waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay balse waxa uu gaashaanka u darruuray inuu isagu kamid yahay kuwa lugu sheego mintidka waa sida ay jariidadu werisaye.
Weeraradii ka dhacay dalka Mareykanka sanadii 2001-da wixii ka dambeeyey caalamku waxa uu muslmiiinta guud ahaantiis u arkayey iney yihiin argagaxiso dalal badan oo reer galbeed ahina waxey bartilmaameedyo ka dhigteen dadka muslinka ah kuwaasoo siyaalo kala duwan u wax yeeleeya. Dalalka Ciraaq iyo Afgaanistaana waxey kamid yihiin dalalka duulaanka Mareykanka ku qaaday isagoo dagaalkaasi ugu magac darray waxa uu sheegay la dagaalanka argagaxisada.
Dad ku dhintay qarax fulkaano oo ka dhacay Ecuador
Ugu yaraan shan ruux ayaa lugu soo waramayaa iney dhinteen sadex iyo toban kalena ay dhaawacmeen kadib markii magaalada la yiraahdo Tungurahua oo xaga koonfureed kaga taal dalkaasi Ecuador uu buur u dhawaa ay la qaraxday fulkaano.
"Shan tuulo ayaa u aasatan qaraxii kasoo firdhaday buurtaasi dhalaashay ee dambaska iyo ciida wadatay" ayuu yiri Juan Salazar oo isagu ah duqa magaalada Penipe oo qadka taleefanka ugu waramayey wakaalada AFP. Waxa uu sidoo kale sheegay in ugu yaraan ay dhinteen shan ruux,guryaha tuuladaasi ku taalana uu qaraxyadii buurtaasi ka firdhaday uu sababtay inuu dab ka kaco.
Dadka deegaanka oo gaaraya 3.200 ayaa iyagu ku go'doonson goobaha ay Fulkaanaha ka qarxeen duqa magaaladana waxaa uu sheegay inuusan garaneyn waxa uu ku tilmaamo waxyeelada ay fulkaanahaasi geysteen. Dalal badan oo laatiin Ameerika ku yaala ayaa inta badan waxaa la runsan yahay iney ka dhacaan fulkaano.Machadka Juquraafiga ee jaamacada Quito ayaa iyada horey waxey uga digtay amuurtani in fulkaanahani noqon karro mid ka awood badan kii kal hore dalkaasi uga dhacay.
Madaxweynihii hore ee Paraguay oo geeriyooday
Madaxweynihii hore ee dalkaasi Paraguay Alfredo Stroessner ayaa shalay oo arbaco ah waxaa uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalkaasi Brazil halkaasoo uu magangalyo siyaasadeed ku joogay tan iyo sanadkii 1989-kii markaasoo dowladdii uu hogaaminayey afka ciida loo darray.
Hogaamiyahan oo dad ahaan kasoo jeeda dalka Jarmalka ayaa da'diisu aheyd 93 jir markii uu ku dhintay cisbitaalka dalkaasi sida uu afhayeenka cisbitaalka u shegay wakaalada wararka Reuters, waxaa kaloo afhayeenku sheegay inuu koomo ku jiray muddo dhow maalmood ah qaliin lugu sameeyey awgiis.
Waxaa uu kmid ahaa madaxweyneyaashii ugu ad adkaa ee soomara wadan kamid ah kuwa yaala Laatin Ameerika muddadii uu xilka hayey wuxuu caan ku ahaa musuq maasuq, dadka oo cadaadis loo geysto, maamul xummo iyo isagoo dadka siyaasadiisa dhaliilsan xabsiyada dhigi jiray. Sidoo kale muddadii uu jiray dagaalkii labaad ee dunida waxa uu ahaa nin ay gacan qabteen naasiyiintii Jarmalka,isagoo sidoo kalena soo dhaweeyey keligii taliyihii dalkaasi Nicaraguas.
Ma dhabaa in Wiil 12 jir ah diyaarad raacay isagoon heysan baasaboor iyo tikidh?
Inkastoo la sheegay in wixii ka dambeeyey qaraxyadi dhicisoobay ee lala damacsanaa diyaarado ku socday dalka Mareykanka aad loo adkaayey amniga diyaaradaha la raaco ee dalka Ingiriiska ayaa hadana wargeyska Daily Mail waxaa uu qoray arrin yaab ku abuuurtay dadka qaar taasoo ah in wil 12 jir ah isagoon heysan baasaboor iyo tikidh midna raacay diyaarad ka baxeysay dalkaaasi.
Wiilkan yar oo diyaarad ku socotay dalka Isbeyn ka raacay garoonka diyaaradaha Gatwick ayaa la dareemay markii gabdhaha ka shaqeeya diyaarada gudaheeda ay doonayeen iney cabitaan u qeybiyaan dadka rakaabka ah oo isagana geestiisa ka dalbaday cabtaan iyo waxyaalo kale markaasina in qalad jirro la ogaaday.
Wilkan yari ayaa kasoo baxsaday xerro lugu hayo carruurta oo ku taalay waqooyi galbeed ee dalakasi, waxaana wiilkani la sheegay inuu soo raacay tareen ku socday Ayraboorka kadibna si sahlan ku dhaafay dhamaan qeybihii baaritaanada uu ilaa salka la helay kurisigii uu ka raacay diyaaradaasi ku jeeday Isbeyn.
Shaqaalaha oo dareemay in wiilkaasi si qaladan ku soo raacay diyaarada ayaa ugu dambeyntii waxaa dib loogu celiyey halkii uu kasoo baxsaday ee xeryaha carruurta lugu hayo. Afhayeen u hadlay ayraboorka waxa uu sheegay ineysan dhici doonin arrin ceynkan oo kale ah waxaana uu sheegay in rakaabka ay amaankooda sugi doonaan, iyadoo baryahana ay jirtay shirkada BAA ee dalkaasi ee u qaabilsan duulimaadyada hawada soo wajahaday taxadar xummo baaxaad leh.
Lubnaan iyo Israa'iil oo ogolaaday go'aankii Qaramada Midoobey
Xukuumadda Israa'iil ayaa ogolaatay go'aanka Qaramada Midoobey ee ay soo saartay taasoo lugu jooniyey dagaalka muddada bisha ah ee ay ku heysa gobolada Koonfureed ee dalkaasi Lubnaan. Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Koofi Cannaan ayaa sheegay in qaraarka dagaalkasi lugu soo afjarayo uu dhaqan galayey saaka 7-da arroornimo. Sida uu ku waramayo telefeyshinka SKY News amuurtani Israa'iil waxey aqbashay markey munaaqisho dheer iyo daraadsad ku sameysay danta ugu jirta.
Haweeneyda arrimaha dibada uga ah dalkaasi Israa'iil Tzipi Livni oo dhinaceeda shir jaraa'id shalay ku qabatay magaalada Tale Aviv markii uu soo baxay qaraarka Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in dowlada Lubnaan ciidankeeda laga doonayo iney tagaan dhanka Koonfureed sida ugu dhaqsaha badan. Waxey sidoo kale hoosta ka xariiqday in qaraarkaasi yahay mid dareenksa u leh kooxaha Xisbullaah ee dagaalka kula jira. Qaraarka tirsiguusu yahay 1701 ayey ku sheegtay inuu yahay mid aan hubka kadhigeyn Xisbullah balse tahay mid ka dhigaya iney wax hormar ah sameysao.
Dhinaca kalena xukuumada Beyruut ayaa arrintan aad u soo dhaweysay inkastoo kulan maanta xukuumaddu iskugu iman laha baaqsaday sababo la xirriira gollaha wasiirada oo qaraarkaasi ku kala qeybsamay. Hadal laga soo xigtay Sayid Nusrullah oo ay BBC-da warisay ayaa lugu sheegay in dagaalka Xisbullah socon doono inta ay Israa'iil ku jirto dhulka koonfureed. Labada Ra'iisal wasaare ee Lubnaan iyo Israa'iilna waxey ku tilmaameen go'aanadaasi mid uun joojin karraya dagaalka labada dhinac ka dhaxeeya. Go'aankani waxa uu dhigaya in Israa'iil ay ciidankeeda kala baxdo Koonfurta dalkaasi kadib halkaasi ay yimaadaan ciidamada Qaramada Midoobey oo gaaraya 15.000 askari iyo ciidan katirsan Lubnaan.
Fidel Castro oo sawirkiisi ugu horeeyey la arkay markii la qalay kadib
Hogaamiyaha dalkaasi Kuba ayaa markii ugu horeeysay la arkay sawirkiisa kadib markii qaliinka xagga caloosha lugu sameeyey tan iyo bishii julay ee tagtay.Castro oo u dabaal dagayey dhalashada sanad guuradiisi 80-aad shalay oo axad aheyd ayaa qaliinkia lugu samaayey iyo xaaladiisaa caafimaad laga muujiyey shaki badan ayaa haatan muuqanaeysa in tuhunkaasi meesha ka baxay inkastoo aan weli rasmi loo ogeyn. Balse wargeys ka soo baxa dalkaasi ayaa soo bandhigay sawiro muujinaya Castro oo kursi ku fadhiya taleefana ku hadlaya. Wargeysku waxa uu sheegay in sawiradaasi la qaaday 12 bishan. Hadal uu siiyey wargeyska ayuu u sheegay in xaaladiisa caafimaad ay wanagasan tahay intii xaaladiisa ka wel welshayna uu uga mahadcelinayo islamarkaasina uu da daali doono.Waxaana uu meesha ka saaray liidashada xaaladiisa caafimaad ee la isla dhexmarayey inaanu kasoo reyn doonin tan iyo markii talada dalka uu ku wareejiyey walaalkiisa Raul Castro oo isagu ah nin qabiiryahan ah wasaarada gaashaandhiga haya.
London oo qaraxyo kala laga digayo
Dowlada Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in qaraxyo kale oo gaaraya 30-meeyo ay ku soo fool leeyihiin dalkaasi,kuwaasoo ay ku sheegtay iney yihiin kuwo aan lagawada hortegi karrin marqura. Illo ka tirsan dowalada dalkaasi oo u waramayey wargeyska World of the news ayaa sheegay in qaraxyadani la sheegayo ay noqon karraan kuwo lamid ah kuwii bishii julaay ee sanadkii hore dalkaasi ka dhacay. Urrurada Islaamka dalkaasi ayaa haatan waxey siyaasada dibada ee Britain ku sheegeen kuwo ay dhalinyaradda muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool u aragto kuwo xag jir ah.
Wargeysyada dalkaasi kasoo baxa ayaa iyagana qoray in booliska dalkaasi ay u dhaceen guryaha ay degen yihiin kuwa la tuhmayey ee maleegayey qaraxyadii dhicisoobay ee diyaaradaha dalkaasi u socday Mareykanka lala damacsanaa. Waxyaabo laga helay guryahooda ayaa tilmaamayey iney doonayeen iney sameeyaan waxyaabaha qarxa iyo cajalado laga maqlayey cod kuwaasoo ay ku duubnaayeen raggaasi oo ku doodaya inta qof ay dili karto qarax dhaca. Wargeyska The Observer ayaa sheegay in illo ay u sheegeen in 50-neeyo ragg ahi ay ka qeyb qaadanayeen fashilkaasi dhacay kuwaasoo ay la doonayeen in 10 diyaradood ay qarxin lahaayeen haddey howlgalkooda suuragal u noqon laheyd.
Toddobaadkii hore ayey aheyd markii booliska dalkaasi shaaca ka qaadeen iney fashiliyeen qaraxyo lala doonayey diyaaradaha dalkaasi Mareykanka aada, arrintani waxey keentay in isbadal weyn oo xagga socdaalada caalamka laga dareemo iyo cabsi badan oo arrintaasi la xirriirta.
Warar dheeri oo ka soo baxaya iskudeygii qaraxa diyaaradeed ee fashilmay
Iyadoo muddo afar iyo labaatan saac ay ka soo wareegtay isku deygii fashilmay ee lugu doonayey in lugu qarxiyo diyaarado rakaab ah oo ka duulayey garoonka diyaaradaha Hethrrow ee London ayaa hadana wararka ka imanayaa dalkaasi ay aad isku soo tarayaan. Dad badan oo falkaasi fashilmay ku lug lahaa ayaa meello kala duwan oo dalkaasi kamid ah laga soo qab qabtay.
Booliska London ayaa shalay oo jimco aheyd salaadii jimcaha kadib waxey baaritaano ugu dhaqaaqeen kuwaasoo ay ku baadi goobayaan rag ay weli tuhmayaan gaar ahaan xaafada Walthamstow oo ku taala waqooyi bari ee London. Dadka deegaanka oo qaarkood si weyni uga careysan falka argagaxa leh ee la sheegay inuu fashilmay ayaa saxaafada u sheegay iney tahay mid dadka howshaas ku lug lahaa ay wax u dhimeen Islaamka iyo dadkiisa. Mid kamid ah dadkaasi ayaa sheegay inuu jeclaan laheyn in carruurtiisa ay ku dhintaan fal noocaan oo kale islamarkaasina Islaamka aanu dhigeyn in dad aan wax galabsan la laayo.
Mid kamid ah dadkii la qab qabtay ee shakiga loo qabay iskudeygaasi fashilmay ayaa boolisku sii daayeen kadib markii arrintiisa loo gudbiyey maxkamad sida ay warkani qortay wakaalada Rueters. Pakistaana waxey dhinaceeda sheegay in lix qof ay qabatay kuwaasoo ah kuwo taabacsan Al-qaacida. Talyaanigana waxey sheegeen in arrimahan awgeed ay afarteeneyo dad gaarayo oo urruro islaami ah oo kala duwan ku jira ay qabteen mana ay soo saarin tafaasiil la xirrirta qabashada dadkaasi lalal xirriirinayo falalka dhicisoobay ee London diyaaradaha ka duula lala damacsanaa.
Bush: Waxaan dagaal kula jirnaa"Fashiistayaasha Islaamka"ah
In la isku digo ma wax xun oo waa arrin wanagasan laakin sida geed ku badasha laheyn ee naceybku ka muuqdo ku hadlay madaxweyneha Mareykanka Bush ayaa ah mid aan qurux badneyn. Isagoo digniin u jeedinaya dadka reer Mareykan ayuu yiri "Waxaan dagaal kula jirnaa Fashiistayaasha Islaamiga" ah. Shir jaraa'id oo ku qabtay gedida diyuuradaha Austin Straubel International Airport ee Wisconsin ayuu sheegay in dadka reer Mareykan difaacayaan weerarkasta oo lala damco isagoona qalad ku tilmaamay inaan la aamini karin iney cabsiyi jirto.
Isagoo Telefeyshinka la iska arko si toos ah uga hadlayey ayuu weeraray Al-Qaacida kuna tilmaamay iney ku lug lahaayeen qaraxyadaasi dhicisoobay ee lugu doonayey in lugu qarxiyo diyaarado u socday dalka Mareykanka.
"Dalkeena waxa uu dagaal kula jira "Fashiistayaasha Islaamka ah ee doonaya iney adeegsadaan waxkasta oo ay ku bur burin kartaan kuweena jecel xorriyada islamarkaasina dhaawac u geystaan qarankeena" ayuu yiri Bush oo aan ereyga Fashiiste la gaban isagoo si toos ah Muslimiinta ugu aflagaadooday islamarkaasina muujiyey in in dagaal lugu jirro dadka Muslinka ah.
Dhinaca kalena Dalalka Midowga Yurub ku jira ayaa shir deg deg ah oo ay kaga hadlayaa qaraxyada dhisoobay ee diyaaradaha ka yeelaan toddobaadka dambe sida ay tebisay wakaalada wararka ee AP inkastoo shirkani goorta iyo halka uu ka dhacayo aysan wakaaladu sheegin hadana waa mid lugu wado in amuuraha haatan soo cusboonaday looga hadlo.
Mustafa Maxamed oo aan soo bixin ciyaarihii European Athletics
Wiilka Soomaaliyeed ee ku ciyaara magaca Sweden islamarkaasina oroda orodka 3000 m ayaa isagoo ka qeyb qaadanaya ciyaaraha haatan maraya marxalad gebo gebo ah ee European Athletics ee ka socda Magaalada Gothenburg ayaan isagu soo bixin ciyaartii feynalka aheyd ee u ciyaaray shalay oo jimco aheyd kadib markii uu galay kaalinta Afaraad. Mar uu hadal gaaban siiyey telefeyshinka wadanka ee SVT ayuu sheegay inuusan helin fursad uu horey u soo carari lahaa iyadoo ciyaartoodeydii kale ee feer rooreysay uu midba midka kale u diidayey fursad uu ku dhaafo. Balse waxa uu sheegay inuu aad ugu qanacsan yahay da daalkiisi dheeraa ee u galay orodkan inkastoo sidduu doonayey aan noqon.
Mustafe iyo C/risaak Diirshe waxey labaduba ahaayeen dhalinyarro orodka ciyaara oo dalkan Sweden u ciyaarayey ciyaarahana ka qeyb qaadanayey balse labaduba sidii laga filaayey ma noqon marka laga reebo iney da daal iyo karti muujiyeen.
Fashil lugu sameeyey diyaarad aadi lahed Mareykanka oo qarax lala damacsanaa
Booliska dalka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday maanta iney fashil ku sameeyeen qarax lala damacsanaa in lugu sameeyo diyaarad ka baxi laheyd London oo ku socotay dalka Mareykanka. Sarkaal u hadlay booliska London waxa uu sheegay in qorshahaasi argagixiso uu ahaan lahaa mid qasaaro weyn geysta.Balse ma aanu caddeyn in qaraxaasi diyaaradeed lala beegsan lahaa diyaarado kale oo toboneeyo gaaraya.
Dhamaan diyaaradihii u kala gooshayey dalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa gebi ahaan waxaa la geliyey hakad iyadoo heeganka amaan ee britain guud ahaan la geliyey heerkii ugu sareeyey, sidoo kalena waxaa ilaa arrintani si wanaagsan looga baarayo la joojiyey dhamaan diyaaradaha ka yimaada wadama Yurub. Dalka Mareykanka ayaa sidoo kalena waxaa la joojiyey dhamaan diyaaradaha Yurub ka imanaya markii warkan ku saabsan fashalka argagaxiso ee diyaarad u socotay Mareykanka oo la doonayey in la qarxiyo la shaaciyey. Mareykanku waxa uu heerkii ugu sareeyey geeyey sugida amniga dalkaas oo waxaaba durba Britain iyo Mareykankuba sheegeen inaan dadka safaraya aysan boorsooyinka gacanta lugu qaato diyaarada gudaheeda la kori karrin, halka waxyaabaha dareera sida cabitaanada, kareemada iyo saliida timaha la marsado ee qaarkood burcada tahay la mamnuucay in diyaarada lala raco.
Arrintani oo ah mid guud ahaan xaalada dadka rakaabka ah ee adduunyada iskaga kala gooshto ku keeneyso waxyaabo badan oo argagax geliya ayaa hadana tahay mid lugu doonayo in lala socdo dhaq dhaqaaqyada kooxaha wax qarxiya ee argagaxisada lugu sheegay kuwaasoo maantaba damacsanaa iney qarxiyaan diyaarad rakaab oo Mareykanka u socotay.
"Al-Qaacida oo durba farta lugu taagay"
Iyadoo ilaa hada aan si rasmi ah loo sheegin cida ka dambeysay qaraxyadaasi diyaaradeed ee la fashaliyey ayaa hadana waxaa jira warar sheegaya in Alqaacida ay farta ku godan tahay. Kow iyo labaatan ruux ayaa la qabtay iyadoo booliskuna ay weli raadinayaan qaar kale oo la tuhunsan yahay.
Labo kamid ah kuwa la tuhunsan yahay ayaa la sheegay in laga soo qabtay gobolka Brrmingham ee dalkaasi Britain.
Ilox xog ogaal isku sheegay ayaa waxey iyagoo u waramaya CNN-ta Mareykanka sheegeen in urrurka Al- Qaacida ka dambeeyo weeraradaasi fashilka ku yimid. Ninka la yiraahdo Michael Chertoff oo isagu ka tirsan hey'ada la yiraahdo Homeland Security ayaa in qorshaha fashilka ku yimid u eg yahay "qorsheyaalki Al-Qaacida. Telefeyshinka SKY News ee dalka Britain ayaa sheegay in kow iyo labaatanka ruux ee la qabtay ay yihiin dhamaantood muslimiin ka soo jeeda Pakistaan iyo wadamada Eeshiyaanka ah, intooda badana waxey ku dhasheen dalkaasi balse cadeyn buuxda oo la xirriirta falka lugu tuhmayo ma jirto ilaa iyo hada cid cadeysay.
Ninka la yiraahdo Peter Clarke oo isagu madax ka ah booliska Metro-ga London ee ka hortaga argagaxisada ayaa sheegay iney bilooyin dabagal ku hayeen kooxahaas kuwaasoo ay si weyn ula socdeen dhaq dhaqaaqyadooda, kulamadooda iyo socdaaladooda waxaana uu hoosta ka xariiqay iney ku guuleystay iney wax badan ka ogaaden qorsheyaalka ay damacsan yihiin.
Wasiirka arrimaha gudaha Britain John Reid oo shir jiraa'id kala qeybgalayey dhinaciisa booliska London ee Scotland Yard ayaa sheegay in dalkiisa haatan xaalad qatar oo argagaxiso ah soo wajahaday markii ugu horeysay muddo lix sanno ah, wuxuuna carabka ku adkeeyey in raggii qorshahan hormuudka u ahaa la qabay qaarkood. Dadka reer Britaina wuxuu ugu baaqay ineysan qal qal gelin ee ay xaaladu tahay digniin argagaxiso. Arrintan ayuu sheegay inuu wargeliyey ra'iisal wasaare Tony Blair iyo xoghayhiisa arrimaha Dibada.
Dadka odorosa siyaasada cabsida badan ee haatan caalamka lugaha galay ayaa sheegaya in dagaalka bariga dhaxe ka socda ay salka ku heyso iyadoo cabsi laga qabo kooxaha Muslimiinta ah ee ka careysan siyaasadaha Mareykanka iyo Britain iney ku lug lahaan karaan, dhinac kalena waxa ay leeyihiin kooxahan siyaasada kala rog rog waa mid indha caalamka loogaga jeedinayo waxa barriga dhaxe ka taagan iyo awooda meleteri ee ay Israa'iil sheegatay inu ku muquunineyso Lubnaan iyo kooxaha iska caabinaya ee Xisbullaah oo caalamku aan ilaa haatan wax ka qaban.
Muslimiinta oo ay weji gabax u tahay in qarax kasta oo dhaca dusha laga saarro
Dabcan dadka Muslinka ah iyo dunida Islaamkaba indhawaale sharaf iyo qiimo kuma laheyn reer galbeedka argagaxiso hadey dunidan jirto iyo hanaanka kasta oo ay ku timidna cida sida tooska ah ee loo abaaro waa dadka Islaamka sheegta. Saas oo ay tahayna waxaad maqleysaa had iyo goor marka meel dhibaato ka dhacdo iyadoo dusha laga saaro dadka muslimiinta ah ee magacyada badan loogu yeero sida "Islaamiyiinta mayalka adag, kooxaha xag jirka ah" iyagoo dhamaan magacyadaas iyo inkale oo ka sii liidata had iyo goor lugu lamaaniyo magaca Islaamka ayaa hadana dunida Islaamku noqdeen kuwo aan laheyn awood ay xitaa magacyadaasi xun xun ee loogu yeero aaney aheyn waxaaba taasi u sii dheer in dhexdoodi laga dhaa dhacsiiyey iney iskugu yeeraan.
Taasina waa mida maanta u ceebta iyo weji gabaxda u ah sharaftoodii dadnimo ee Illaahey siiyey ku dhuntay. Reer galbeedkuna awoodooda waa mida gaarsiisay iney gaaraan heer Rasuulkii Alle ee Illaahey ummaddan u soo diray aflagaadeeyaan cid si dhab ah uga dhii dhisayna aysan jirin.
Amuurahan dhacaya waxaan shaki ku jirin astaamihii Suubahaneena SCW noo sheegay iney iman doonaan kolka ay soo dhowdahay Qiyaamaha ayaa hadana waxaa mudan in Diinta iyo Islaanimadaba la difaaco ee lugu xadgudbin.
Waxaa soo urruurisay; Ikraam Cali-kaar
SomaliTalk- Gothenburg- Sweden
Labo dhalinyarro oo Sweden u ciyaaraya ayaa u soo gudbay ciyaarta feynalka ee Ciyaaraha European Athletics
Iyadoo si habsimi ah uga socdaan magaalada Gothenburg ee caasimada labaad ee wadankan Sweden ciyaarayaha fudud ee loo yaqaano European Athletics ayaa waxaa maanta oo arbaca orodka 3000 m orday wiilka soomaaliga ah ee magaciisa la yiraahdo Mustafa Maxamed inkastoo uu kaalinta afaraad galay hadana waxa uu soo gudbay wareega ugu dambeeya ee feynalka ah isagoo qiyaas dhan 8.32 ku ciyaaray halkii laga doonayey 8.26. Inkastoo natiijadaasi aheyn mid uu aad u soo dhaweeyey Mustafa hadana shir jiraa'id oo uu qabtay ayuu sheegay iney ugu wacan tahay dhaawac lugta ka soo gaaray xilligii uu qaadanayey taba barka uu dalka dibadiisa uga maqnaa oo uusan weli ka kabsan. Balse waxa uu sheegay in wacdarro muujin doono ciyaarta faynalka ah oo jimcaha uu ordayo hadaaney dhaawacaasi ku soo labo kacleynin.
Sidoo kale waxaa isna jira wiil kale oo magaciisa la yiraahdo C/risaaq Diirshe oo isna orda 1500 ayaa ciyaarti maalintii uu orday waxa uu galay kaalinta lixaad sidaasina uu ku yimid ciyaarta kama dambeysta ah ee feynalka. Mar uu ka hadlayey sababta uu lixaad u galay ayuu sheegay in wareegii hore uu aad u ciyaarayey siweyna uga muuqday garoonka balse dib u dhac soo wajahay markii uu dareemay daal badan iyo wareer xagga madax ah, wuxuuse rajo ka muujiyey inuu kaalin muuqda oo wax ku ool ah ka geli doono ciyaarta faynalka ah ee ciyaari doono maalinta khamiista. Labadan wiil ee soomaaliyeed ayaa magac iyo texgilin ku leh dadka reer Sweden gaar ahaan Mustafa oo isagu ah ninka ugu ciyaarta wanagasan dalalka Iskaadaneefiyanka ee waqooyiga Yurub marka laga hadlayo 3000 m.
Nin Iiraani ah Islaamkana ka baxay oo ku biiray xisbiga shisheeyaha neceyb ee Sweden
Ma ahan wax lala yaabo in dadka asal ahaan u dhashay wadanka Iiraan ay marka dibadaha yimaadaan diinta ka baxa iyagoo ku andacooda sababo aan la qaadan karrin saas oo ay tahayna badi dadka dalkaasi u dhasha waa kuwo dhankasta ka dhisan marka aqoonta laga hadlayo, dalkoodana waa dal la aaminsan yahay inuu yahay in dadka ku nooli ay yihiin kuwo caqiido adag ku tagan shiicaba ha ahaadane.
Hadaba dalkan Sweden waxaa jira xisbi kamid ah kuwa xag jirnimada iyo naceybka dadka laga tirada badan yahay ee ajanabiga neceb waxaana xisbigaasi la yiraahda Sveriges Domokrat (Swedish Democratic Party). Xisbigan oo aan awal shacbiyad badan dalka gudihiisa ku laheyn ayaa haatan la soo baxay dar dar xoogan iyo ollole uu ku doonayo in dooroshooyinka dalkan ka dhacay bisha september kaga qeyb qaato. Xisbigan oo asxaabta siyaasadeed ee kale ay cabsi weyni ka muujiyeen ollelaha xoogan uu ku jira ayaa shaki ka badan waxey ka muujiyeen iney waayaan kaalintoodi siyaasadeed waxaana ay dadka uga digeen inaan xisbigaasi iyo xubinihiisa la siicin cododka doorashada.
Sidoo kale ayaa waxaa xisbigan kamid ah nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Iiraan muddo 21 sanno ahna dalkan ka daganaa ayaa sheegay sababta uu uga baxay diinta Islaamka tahay isagoo aan ku qanacsaneyn hanaanka diinta ku socoto. Ninkan oo magaciisa ahaan jiray Mohamed Ebrahim ayaa haataan la baxay magaca ah Samuel �lgemark oo ah magac Swedhish ah. Xisbigan oo su'aalaha hortaagan oo dooroshooyinka uu doonayo inuu kaga qeyb qaato ayaa waxaa kamid ah siyaasada dowlada ee shisheeyaha ku wajahan, xusul duub loogu jiro inaan masjid muslimiintu leeyihiin laga dhisin tuulada la yiraahdo V�xsj� iyo dunida Muslinka oo xagga dhankooda aanu ka shaqeyn karrin dalalka reer galbeedka ah.
Mar uu difaacayey hanaanka xag jirnimada ah ee xisbigaasu ayuu sheegay ninkani in Xisbigu aanu aheyn waa sida uu hadalka u dhigaye mid aan shisheeyaha necbeyn balse doonaya iney dalalkooda dib ugu laabtaan oo ay dhistaan.
Israa'iil oo balaarineysa weeraradeeda ka dhanka ah Lubnaan
Gollaha wasiirada ee Israa'iil ayaa isku raacay in la balaariyo dagaalka xagga dhulka ah ee lugu hayo Lubnaan si loo cirib tirro awooda Xisbulaah ee weli ku xoogan koonfurta dalkaasi. In ka badan 10.000 oo askarina waxey haatan ku jiraan meelo kamid ah magaalooyinka koonfurta ku yaala si ay u si wataan duulaankooda. Mid kamid ah wasiirada Israa'iil oo saxaafada hadal siiyey ayaa sheegay in ugu yaraan 30 cisho uu qaadanayo howlgalkaasi ka hor inta ay halkaasi iman ciidamada Qaramada Midoobey ka socda ee la dhigi doono xadka labada dal.
Dhinaca kalena waxaa magaalada New York ee xarrunta Qaramada Midoobey gaaray wefdi uu hogaaminayo xogahayaha jaamacada Carabta Caamir Muusa si uu gollaha uga codsado in dagaalka Israa'iil si deg deg ah loo joojiyo. Balso gollaha oo u muuqda mid ku fashilmay gebi ahaanba inuu joojiyo dagaalkaasi ayaa la filayaa in go'aan amuurtaasi la xiriirta ay soo saaraan taaasoo ay awal ahaa go'aanadooda mid qabyo ah oo aan dalalka xubnaha ka ah gollaha isku si u wada arag.
Wasiirka arrimaha dibada Qadar oo xoghayaha la socday ayaa sheegay in caalamka raali uga tahay waxa ka dhacaya Lubnaan baaqoyo ay qorey u soo jeediyeena ay iska indho tireen isagoo sidoo kalena sheegay in beesha caalamka ay mas'uul ka tahay cawaaqib xumaddii ka dhalatay duulkaanka gardarada ah ee ay Israa'iil ku heyso Lubnaan oo ah dal carbeed oo aan awood laheyn.
Israa'iil ayaa sidoo kale waxey weli wadaa weerarada xaga cirka ah ee ku heyso koonfurta lubnaan waxaana ay maanta duqeysay meelo kamid ah dalkaasi oo ay ku dishay dad badan oo rayid ah. Sidoo kale gantaalo ay soo tuureen Xisbullah ayaa iyagana dilay dhowr askari oo Israa'iiliyiin ah.
Wadamada Yurub oo qaarkood bilaabaya iney carruurta faro ka qaadaan
Iyadoo ay tahay mid aan nimadaanka qaxootinimada dhigeynin in carruurta ay da'dood ku hooseyso 14 sanno farro laga qaado ayaa wadamada Yurub qaarkood waxey ku howl jiraan sidey carruurta ugu qaadi lahaayeen faraha kolka ay wadan kamid ah kuwa laga qaabilo magangalyo doonka yimaadaan.
Durba wadama Ingiriiska iyo Holland ayaa arrintani u arki wax weyn oo ay ku yareyn karaan qaxootiga faraha badan ee daloolkooda ku soo qul qulaya. Balse dowlada Sweden laanteeda u qaabilsan qaxootiga ayaa iyadu aaminsan iney tahay arrin u baahan ka fiirsasho. Waxaana mas'uul u hadlay waaxdaasi sheegay in carruurtu aaney laheyn garaad ay ku kala xulanayaan wadamada ay tagayaan ama ay iska dhiib karaan. Laakin arrintani waa hindse hadda dowlada Miiska u saaran oo suuragal ka dhigeysa in carruuraha keligood socda ee iyagu wadamada Yurub weydiista nagagalyo laga qaado faraha.
Haddii arrintani noqto mid taaba gasha waxaa markaasi yaraanaya carruurta faraha badan ee wadama Yurub ku soo qul qula kuwaasoo qaxooti ahaan isku dhiba. Sidaan ka warqabana mudooyinkan ugu dambeeyey waxaa aad u soo badanayey dadka afrikaanka ah ee qaarada Afrika doon ka soo raaca kuwaasoo intooda badan gacan lugu dhigo qaarkoodna dib loo celiyo halka qaar kale oo iyaga kamid ahina ay ku dhintaan badweynta u dhaxeysa Talyaaniga iyo Afrika.
Venezuela iyo Israa'iil oo danjirayaashooda u kala yeertay
Danjiraha dowlada Israa'iil u fadhiya dalkaasi Venuzuela ayaa u yeertay maalintii kadib markii xirriirka diblomaasiyadeed ee labadaasi dal soo xumaaday tan iyo markii Israa'iil ay dagaalka ku qaada koonfurta Lubnaan 12-kii julay.
Madaxweynaha dalkaasi Venezuela Chavez ayaa waxa uu weeraray siyaasada Israa'iil ee barriga dhaxe, isagoo sheegay in " Israa'iil waalatay islamarkaasina weeraro ku qaaday dalalka Lubnaan iyo Falastiin" waa sida uu warka u sheegaye.
Israa'iil waxa ay sheegtay xiritaanka safaaradeeda ee Caracas iney tahay arrin ku meel gaar ah oo ay kaga dooneyso jawaab amuurta la xirriirta siyaasadaheeda oo ay Venezuela farro gelisay.
Toddobaadkii horena waxaa madaxweynaha Venezuela booqasho qaadatay labo cisho ku tagay dalkaasi Iiraan halkaasoo ay si wadajir ah Axmedinejaadka dalkaasi ay u cambaareeyeen dagaalka Israa'iil ee ka dhanka ah Lubnaan.
Afhayeen u hadlay wsaarada arrimaha dibada Israa'iil ayaa sheegay dowladiisa ay wel wel ka muujisay In madaxweynaha Venezuela uu taxaaluf la sameysto "canaasir kamid ah kuwa ugu xag jirsan barriga dhaxe". Booqashada Chaver ee reer Venezuela ayaa waxaa qudbadiisi xamaasada laheyd noqoneysa mid aad looga soo dhaweyey barriga dhexe islamarkaasina uu doonayo inuu xirriir dhow oo mida haatan la leeyahay ka wanaagsan la yeesho wadamada Carabta ee ay reer galbeedku Yahuudu kaga hiiliyeen.
Sweden oo dib ugu celisay qaxootiga Ciraaq dalkooda
Iyadoo Sweden horey loogu eedeyn jiray iney meel uga dhacday xaquuqda aadanaha ayey hadana mar kale bilowday iney dib u celiso dalkooda xaqootiga u dhashay dalka Ciraaq. Sanadkan gudihiisana in ka badan 30 qof oo u dhashay dalkaasi ayey laanta socdaalka Sweden oo kaashaneysa booliska ay musaafiryiin qaxootigaasi. Maalintii arbacada ayaa nin dalkaasi u dhashay ay booliska diyaarad saareen dalkiisana dib ugu celiyeen,kadib markii ay heleen amar kasoo baxay laanta socdaalka.
Booliska oo arrintan gacanta ay ka geysteen iska fogeynaya ayaa sheegay ineysan shaqo ku laheyn amarka lugu musaafurinayo qaoxootigaasi reer Ciraaq balse ay fuliyeen amar maxkamadeed. Wasaaradda arrimaha dibada dalkan ayaa waxey sanadkii hore uga digtay muwaadiniinteeda iney u socdaalaan dalkaasi oo xaalad amaan darro ti ugu xumeyd ka jirta. Balse laanta socdaalka iyadoo iska indho tireysa warbixinta ay soo saartay waaxda dibada ayaa dib u celisay ninkaasi xilli ay magaalada Bakhdaad ay ku dhinteen qarax ismiidaamin ahi ka dhacday islamarkaasina ay ku dhinteen in ka badan 55 ruux oo rayid ah.
Hey'ada u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnisty International ayaa cambaareyn u soo jeedisay laanta Socdaalka Sweden waxaana ay ku tilmaantay falalka noocan ah kuwo ay xad gudub ku sameysay xuquuqda qaxootiga Ciraaqiinta ah ee maanta dalkoodu laheyn nabadgalyo la isku haleynayo iyadoo la og yahay in dalkaasi uu ka dhaco maalin walba qaraxyo ismiidaamin ah oo ay isla beegsanayaan kooxaha shiicada iyo sunniyiinta.
Thailand oo markale laga helay dureyga shimbiraha
Dowlada dalka Thailand ayaa maanta shaaca ka qaaday in mid kamid ah muwadiniinteeda uu u geeriyooday cudurka dilaaga ah ee Dureyga Shimbiraha sida ay warkani kasoo tebisay dalkaasi wakaalada wararka AFP. Ma sheegeen dowladu iney jiraan dad kale oo cudurkaasi u dhintay balse dalkaasi waxa uu kamid ahaa dalalka uu cudurkaasi waxyeelo weyn u geystay tan iyo markii uu soo shaac baxay sanadii 2004-tii. Afar iyo labaatan qof ayuu xanuunkaasi ku dhacay lix ito toban kamid ahina waa u geeriyooday.
Ingiriiska oo ay ka dhaceen baxnaanbaxyo loogaga soo horjeedo Israa'iil iyo diyaarado rakaabo ah oo sida bambaanooyin oo ku hakaday
Magaalada London ee xarrunta u ah dalka Ingiriiska ayaa banaanbax si weyn ee ay ugu qeyb galeen kumaan kun oo reer London ah ka dhacay, waxaana looga soo horjeeday dagaalka ay Israa'iil ku qaaday dalkaasi Lubnaan oo ay ku dishay in ka badan 600 oo rayid ah.
Banaanbaxan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey urrurka la baxay "Stop the war" ( Jooji dagaalka).
Dadkan banaanbaxay ayaa waxey si weyn uga soo horjeedaan dowrka ay dowlada Washington ku leedahay dagaalkan iyadoo lugu eedeynayo iney gacan siisay Israa'il. Waxey dadkani ku horbanaan baxeen safaarada Mareykanka dibna waxey u soo gudbeen aqalka looga arrimo dalkaasi Briatan.
Ururka bananbaxan soo qaban qaabiyey ayaa sheegay iney ujeedadooda tahay sidey xukuumada Blair ay ugu cadaadin lahaayeen inuu gacan ka geysto sidii dagaalkaasi loo joojin lahaa. Urrurka Islaamka ka dhisan dalkaasi ayaa dhinacooda sheegay iney dhambaal u direen Tony Blair oo ay kaga codsanayaan sidii dagaalkaasi wax uga joojin lahaa.
Dhinaca kale labo diyaaradoo oo kuwa rakaabka qaada ayaa la sheegay iney ku hakadeen gegid diyaaradood oo ku yaala Clascow kuwasoo noocoodu yahay BOING 747 waxaana ay sideen diyaaradahaasi hub halis ah oo loo waday dalka Israa'iil. Bush-na waxaa la sheegay inuu ugu cudur daartay Blair diyaaradahas dalkiisa ku hakaday. Balse haweeneyda uga ah arrimaha dibada dalkaasi ayaa sheegtay iney tahay wax laga xumaado haddiba ay diyaaradahaasi ogolaansho la'aan dalkeeda ku hakadeen. Balse wargeyska Times ayaa sheegay in diyaaradahaasi ay saarnaayeen bambaanooyin noociisa lugu sheegay GBU 28. Wargeyska kale ee la yiraahdo Daily Telephraf ayaa isna dhinaciisa shaaciyey garoonkaasi diyaaraduhu ahaayeen kuwo ay CIA-da sida qarsoodiga ah uga soo daabuleyn jirtay maxaabiista u badan muslmiinta ee ay ku sheegeen argagaxsiada. Isku soo duuboo dowladaha Britan iyo Mareykanka waxaa muuqata iney dowr weyn ku leeyihiin dagaalka ay haatan Israa'iil ku heyso Lubnaan balse ay marwalba beeniyaan amuurtaasi.
Israa'iil oo maanta laga dilay ciidankii ugu badnaa tan iyo intey dagaalka bilowday
Xaalada cakiran ee dagaalka bariga dhaxe ayaa maalinba maalinta ka sii dambeysa cirka isku shareereysa, maantana lix iyo toban askari oo kamid ah ciidamada israa'iiliyiinta ayaa lugu dilay magaalada Haifa ee dhanka waqooyi ee dalkaasi, kadib markii maanta dagaalyahanada Xisbullaah 150 gantaalo ay ku gantay. In ka badan 160 qof ayaa lugu soo waramaya iney ku dhaawacmeen gantaalahaasi, halka sadex rayid ahina ay sidoo kale ku dhinteen. Sidoo kelna 12 qof oo rayid ah ayaa iyana dhintay markii uu ku soo dhacay gantaal ay Xisbullaah soo tuurtay.
Diyaaradaha dagaalka Yahuuda ayaa iyagoo ka jawaabaya gantaalaha Xisbullaah waxey banmaanooyin la dhaceen tuulooyinka ku yaala dhanka koonfureed ee Lubnaan halkaasoo muddo 30 daqiiqo oo aan kala go'laheyn ay u duqeynayeen.
Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay tuula la yiraahdo Ansar sida uu warkan mid kamid booliska dalkaasi u xaqiijiyey wakalaada wararka ee AFP. Israa'iil ayaa sidoo kale waxey gantaaladeeda ay kasoo ganeyso diyaarahada dagaalka la beegsada wadooyinka ay maraan gawaarida, saaka arroortiina ciidamada israa'iilyiintu marey galeen marinka Qaza waxey dileen lix falastiiniyiin ah.
Bambkii Hiroshimo oo ay ka soo wareegtay 61 sanno
Kumanaan dadweynaha reer Hirashimo ayaa iskugu soo baxay magaaladaasi iyagoo xusaya maalintii madowbey ee soo martay luguna dhiftay bambkii adduunyada gil gilay sanadkii 1945-tii wax yar ka hor dhamaadkii dagaalkii labaad ee dunida.
Dadweynihii isku soo baxay oo aafadii qumbol durayadii lugu dhiftay u baroor diiqaya bololaalkii kun ee ku dhintay ayaa dunida ka codsaday hakinta hubka Nukliyeerka oo ay sheegeen iney tahay mid waxyeeladiisu badan tahay.
Saacada Hiroshima markey aroornimadii axadu aheyd 8.15 ayaa dawanka nabadeed ka kor yeeray barta loo yaqaan Hiroshimas Peace Memorial Park halkaasoo ah goobtii baroordiiqdu ka socotay.
"Gariir iyo cadaab darran ayaa ka dhacay dunida markii bambkaasi lugu dhiftay Hiroshima" ayuu yiri duqa magaalada Hiroshima Tadatoshi Akiba oo isagu ka waramayey 6 Agoosto sanadkii 1945-tii wixii maalintaasi ka dhacay Hiroshima. Akiba waxa uu codaday in la sameeyo urruro iyo hey'ado ka xoreeya caalmka Nukliyeerka.
" Lix iyo kow sanno oo ay kasoo wareegtay musiibadii Hiroshima waxaa jira dalal badan oo nukliyeerka si qaldan u isticmaalay ama aan mas'uuliyad iska saarin.Goormeyse aduunyadu ka xoreybeysa Nukliyeerka mise addoon bey u ahaan doonta" ayuu is wyeydiiyey Akiba oo weli ka hadlayey bamkaasi iyo waxyeeladiisa.
Intuu socday dagaalkii labaad ee dunida Japaan oo nasiib u yeelatay in diyaaradaheeda garaacaan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa iyagana jawaab looga dhigay in lugu rido qumbulo durriyadii ugu horeysay ee aadanaha kownkan ku nool lugu dhifto tan iyo markii hardanka awoodeed dhexmaray dalalka haatan la baxay wadamada Horeymaray gaar ahaan Mareykanka iyo Japaan. Bishii Ogoosto 9-keed isla sanadkaasi waxaa markale diyaaradaha dagaalka Mareykanka qumbulo duriyo kale ku dhifteen magaalada Nagasaki, lix cisho ka dib dowladii waqtigaasi ka jirtay Japaan wey dhiibtay kadib markey qiratay iney ku jabtay dagaalkii ay kula jirtay Mareykanka.
Hogaamiyaha Xisbullaah oo ku hanjabay inuu weerari doono Tel Aviv
Hogaamiyaha dhaq dhaqaaqa Xisbullaah ee dagaalka haatan kula jira ciidamada Israa'iil ayaa xalay fariin muuqaal ah oo u diray dowlada Israa'iil ku sheegay inuu duqeyn doono caasimada yahuuda ee Tel Aviv, hadalkanina waxa uu sheegay mar uu ka hadlayey telefeyshinka Xisbullaah taageero ee Al-manaar ayuu sidoo kale sheegay iney joojin doonaan dhankooda gantaalada ay Israa'iil ay ku tuuraan haddii israa'iili yiintu dhaafaan weerarada cirka ah ee ay ku hayaan Beyruut. Balse wuxuu wacad ku maray inuu markoodana waxyeelo culus u geysan doono Tel Aviv oo ah magaalo madaxda Israa'ii.
Inkastoo hadalkani wax weyn aysan ka soo qaadi doonin israa'iiliyiintu hadana waa markii ugu horeysay ee ka hadlo Almanaar tan iyo intii labadii cisho tagay ee Xisbullaah gantaalo ay tuureen gaaray dhulka falastiiniyiinta. Israa'iilyiintu waxey qirteen awooda Xisbullaah ee ay iskaga difaacayaan weeraradooda cirka iyo dhulka ah balse waxey sheegeen iney kala dhantaaleen awoodoodi, halka Xisbullaah lafteeda ay sheegtay iney dhirbaaxooyin culus ku dhifatay ciidamada israa'iil.
Dalalka Islaamka oo codsaday iney ciidamo nabad ilaalin ah u diraan Lubnaan
Dalalka xubnaha ka ah urruka Islaamka ayaa Qaramada Midoobey waxey ka codsaadeen iney la timaado cadaadis culus oo ay ku joogineyso dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Xisbullaah. Waxey sidoo kale codsadeen dalalkaasi iney dhankoodana ciidamada nabad ilaalineed ee loo dirayo xadka labada dal ay ka qeyb qaataan.
Shir ay shalay iskugu yimaadaan xubnaha urrurada Islaamka iyagoo ku shirayey magaalo madaxda Maleysiya ee Kula Lumpor ayey misna sheegeen madaxdii shirkaasi ka qeyb gashay in Israa'iil dambiyad dagaal ee ay gashay la baaro.
Dhinaca kale dalka Faransiiska ayaa sheegay iney Qaramada Midoobey soo hordhigayaan hindso cusub oo lugu doonayo in dagaalkaasi lugu joojiyo si kasta oo Mareykan arrintani isku hortaago waxaa ka go'an iney saameyn weyn ku yeellato xal u helida mushkilada barriga dhaxe oo uu golluhu ka munaaqishoon doono codna ay u qaadi doonaan maalmaha fooda innugu soo haya.
Faransiiska oo qaadacaya shirka Qaramada Midoobey ee arrimaha Lubnaan
Faransiiska waxaa uu qaadaya shirka maanta oo khamiis ah loogaga arrinsanayo dagaalka lugu qaaday Lubnaan. Warkan ayaa ilo diblomaasiyadeed oo faransiis ahi waxey u sheegeen wakaalada wararka ee AP.
Shirkan maanta oo khamiis ah qabsoomaya ayaa dalal gaaraya afartaneeyo wadan ay ka qeyb galayaan,waxaana ay dalalkaasi ka munaaqishoon doonaan sida ugu macquulsan ee Lubaan ciidamo nabad ilaalineed loogu diri lahaa waaba haddii Israa'iil ay joojiso weerarada ay ku heyso dalkaasi. Shirkan ayaa sidoo kale lugu waday in maalintii isniinti ee ina dhaaftay dhaco balse arrimo aan la shacin loo baajiyey, inkastoo faransa dhankeeda ay ku sheegtay shirkaasi mid soo deg degay, maadama dalku ku howlan yahay arrin diblomaasiyadeed oo ku doonayo iney wax kaga qabtaan arrimaha taagan.
Koonfur Afrika oo 25 sanno kadib baraf badan ka da'ay
Inkastoo aaney aheyn markii ugu horeysay ee taariikhda dalkaasi baraf ka da'do hadana waxaa la runsan yahay iney tahay markii ugu horeysay muddo 25 ah uu baraf noocani oo kale ka da'do magaalada ugu weyn wadankaasi Johannesbuerg.
Ma ahan oo keliya barafkaasi waxaa dalkaasi meelo kamid ahi ka da'daye waxaa u dheer dabeysha xooga ku socoto ee Tornado la yiraahdo, taasoo dhibaato ku heysay dadka deegaanada ay dabaashi ka jirtay ee a ywax yeelo u geysatay. Gobolka Soweto oo kamid ah dalkaasi ayaa iyadu aheyd magaalo inta badan lugu arkayey roobabka, dabaeysha iyo barafkaasi laftiisa. Saxaafada maxaliga ah waxey soo werisay in debeyshaasi ay dishay afar qofood oo qaarkood la sheegay in baabuur ay la socodeen dabeyshu ku tuurtay webiga. Sidoo kale gobolo dhowr ah ayaa barafkaasi iyo debeyshuba ku socdaan iyadoo ay luxeenba gobolka Dullstroom.
Deybeysha gobolkaasi ayaa qasaarooyin badan u geysatay gobolkaasi kadib markii ay go'een leyrkii iyo korontadii, lix qof oo ka tirsan dadka deegaankaasina uu ka soo gaaray dhaawac. Koonfur Afrika 20-kii sanno ee ugu dambeeyey waxey la xarbineysay dabeylo iyo roobab xoogan oo dalkaasi ka da'o.
Darfur oo loo qorsheynayo in loo dirro ciidamada ugu badan ee Q M ka socda
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey Koofi Cannaan ayaa shalay oo arbaco ah waxa uu gollaha soo hordhigay qoshe uu ku doonayo in gobolka Darfur loo diro ciidamadii ugu tirada badanaa ee Qaramada Midoobey ka socda.
In ka badan 80% ayaa gollaha uu damacsan yahay in ciidanka dalkaasi loo dariyo noqdo mid aad uweyn oo ciidan lugu qiyaasay 24.000 halkaasi la geeyo. Haddi gollaha isku raaco in ciidan tiro intaas la eg u dirro Darfur waxey noqonayaan ciidankii ugu tiro badnaa ee la geeyo marka laga reebo ciidan gaarayey 17.500 askari oo horey loo geeyey dalkii la oran jiray Zair ee Kongo- Kinshasa.
Dowlada Suudaan weli meysan aqbalin ciidamada afrikaanta ah ee gobolkaasi joogo in lugu badalo kuwo kale oo ka socda Qaramada Midoobey. Bale gollaha ayaa laga yaaba in arrintaasi isaga aqbalo iyadoon ogolaansho looga baahneyn Suudaan, inkastoo aan la hubin in dalalka qaar ee gollaha ku jira ay ku yaboohi doonaan ciidan iyo dhaqaale iyadoon ogolaansho laga heysan dowlada Suudaan.
Tan iyo intii mushkilada gobolka Darfur soo shaac baxday sanadii 2003, waxaa la runsan yahay in ka badan 180 000 oo dad ahi ay u dhinteen xasuuqa, kufsiga abaaraha iwm ee halkaasi ka dhacay. Ku dhawaad 2 malyan oo dad ahina waxey ka bara kaceen dagaalkaasi waxaana ay qaxooti ku noqdeen dalalka Suudaan jaarka la ah sida Chad oo kale.
....WARARKII ADDUUNAK EE JULY 2006... GUJI...
.....WARARKII ADDUUNKA EE JUNE 2006.... GUJI....
... WARARKII ADDUUNKA EE MAY,2006... GUJI...
.. WARARKII ADDUUNKA EE APRIL, 2006.... GUJI...
.. WARARKII ADDUUNKA EE BSIHII MAARSO 2006
WARARKA ADDUUNKA EE LABADII TODDOBAAD EE HORE KA AKHRI HALKAN...